Dubartii kubbaa miillaan heeruma ijoollummaa akka hafu godhaa jirtu - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Faaxumaa Abdulqaadir Adan: kubbaa miilaatti fayyadamuun aadaa hamaa cabsite
''Naayiroobii keessa jiraachuun akka oggeettii seeraa tokkootti, dhimmoota seeraa raawwachiisuun maallaqa gaarii ta'e argachaa, konkolaata bareeda kan akka Marsediis beenzii oofuun anaaf filmaata isa salphaa ture."
"Haa ta'u malee gara biyyakootti deebi'uun filadhe."
Sun, jireenya Faaxumaa Abdulqaadir Adan, magaalaa guddittii Keenyaatti jiraachuu maltu ture.
Ishiin garuu kubbaa miillarratti xiyyeeffachuu barbaadde - naannoo ispoortii taphachuun shamarraniif qaanii itti ta'eetti.
Waggoota kudhan dura garee shammarranii Kaaba Keeniyaa naannoo Marsabititti wayita eegaltetti, tattaaffiiwwan jalqabaa goote yoo dubbattu, "Na reebanii dirree kubbaa keessa na ariatan,'' jetti.
Dorgommii jalqabaarraa akkuma deebi'aniin, garee shamarran 12 keessaa saddeet gochi buti irratti raawwate. Jalqaba nama gadisiisu ture.
Faaxumaan bara 2003 keessa dhaabbata mit-mootummaa Dadammaqsa Misoomaa Gaanfa Afriikaa ykn (DMGA/'HODI') jedhamuun beekamu hundeessite.
Ishinis kubbaa miilaa fayyadamuudhaan namoota walitti fidhuufi wantota aadaadhaan raawwatamanirratti jijjiirraa uumuu barbaaddeti.
Kunis ajjeechaan jumlaa bara 2005 gosoota heddu gidduutti uumame namoota 100 eega galaafatee booda, kubbaa miilaatti fayyadamtee waliltti fidhuudhaan onnee dargagoota hawaasota kanaa mo'achuu dandeesseetti.
"Gareen kubba kun meeshaa waraanaa AK-47n bakka kan waljijjiire ture."
Dargaggoonni kunneen meeshaasaanii dafanii akka lafa kaa'an qofa otoo hinta'iin, dargaggoota gosa fi balbala biroorra ta'aniifi kanaan dura wal jibba turani waliinis taphachuu eegalan.
Goodayyaa suuraa Bara 2008 shamarran kubbaa miillaa taphachuun ofiisaattuu qaanii ture
Aadaa badaa ofirraa fageessuu
Faaxumaan wayita gara ijoolee durbaa kanaatti fuulleeffate, rakkoollee shamaman kunneen irra turan kan akka daa'imummaatti heerumsiifamuu fi kittaanaa hanga tokko hir'isuuf yaadde ture.
Calisa hambisuu 'breaking the silence' mala jedhu fayyadamuun Kaaba Keenyiyaa, naannoo Marsaabit gandoota 152 keessaa shamarree 1,645 walitti qabuun waggoota 10 darbaniif tapha kubbaa miillaarratti hirmaachisteetti.
Dandeettii ijoollee kana guddisuun, mirga isaaniif akka dhaabbatan gochuun kaayyoshee isa hangafa ture.
Keessumattu naannoo bakka aadaafi caasaan gosa mirga dhageetti ijooleefi dubartoota sarban keessatti.
"Armaan dura shamarree umrii waggaa 12 ykn 13 herumsiisuun akka waan gaarii tokkootti fudhatama ture, kan jettu Faatumaan "Har'a garuu shamarree waggaa 13 yoo heerumsiiste, shamarran kutaa kessatti argamanis ta'e ijooleen dhiiraa mormii kaasuu.''
Goodayyaa suuraa Faaxuma Guufraa kubbaan miillaa kaayyoo jireenyaa ishee geeddaruuf jabina naaf ta'e jetti.
Keeniyaa keessatti, kittaannis ta'e daa'imman heerumsiisuun seeraa ala ta'us aaddawwan naannoo jabaa ta'uurraa kana gochuun ittuma fufee jira. Faaxumaan kanarratti jabaatte falammii gochuun isaanii waliin taatee irratti hojjechuutu irra ture.
Yaalii isheen ofiishiin godhaa jirtu kun ija godhataa jira.
Barattoonni shamarranii musliimaa heddun kubbaa miilaa taphachuu waan barbaadaniif akkamiin mala fooyya'aa akka argamasiistu geggesitoota amantii Islaamaa (Imaamota) waliin mari'atte.
Yeroo ammaatti dhabni ishee 'HODI' ykn DMGA (Daddammaqsi Misoomaa Gaanfa Afriikaa) jedhamu, Madraasaa, mana barnootaa Islamummaa keesstti garee shamarranii sochoosuutti argama.
"Lubbuudhaan jiraadhee waanti sun ta'uusaa arguukoo ammallee ani hinamanu."
Altokkotti shamarree tokko
Lakkoofsi hirmaattota 'HODI' gudda ta'unsaa, malli kalaqa bifa taphaan jireenya dhuunfaa shamarraniirratti raawwatte kun jireenya namoota hedduu jijjiiraa jira.
Umrii waggaa 14 kan taate Faaxumaa Gufuu, mana barnootaatti pirezidaantii ittaantuudha.
Kan harka-qal'eettii taate haadhashii biratti kan guddatte yoo taa'tu, matiishii keessatti hintala tokkittidha.
"Kubbaan miilaa jireenyakoo jijjiireera" kan jettu Faatumaan "Yeroo jalqabaatti nan qaana'an tures, yeroo muraasa booda garuu kubbaan miilaa na jijjiiree,'' jeteetti.
Waggoota hedduuf maatiin, shamarran kubbaa miilaa akka taphataniif hindeeggaran ture; gara fuulduraatti garuu, wayitan haadha ta'u, shamarran kubbaa miilaa akka taphatan nan gargaara." jetti.
Akkasumas kutashiitti kanneen sadarkaa olaanoo qaban shan keessa jirti- sadarkichi, ijoollee dhiraa soda malee haasa'aniin kan qabame ture ta'uu hoggantuun barsiisotaa, Aadde Kaamee Kootoo ni dubbatti.
"Liigii kubbaa miilaa keessatti hirmaachuu eega jalqabdee booda, Faaxumaan, dhimmoota dandeettiiwwan oggansaafi rawwiirratti sammuunshii bal'ate jira."
"Kun hundi sababa kubbaa miilaatiin ta'uu danda'e," jetti Faaxumaan. "Shamarran yoo jabaatanii carraaqan, kutaa keessattis ta'e dirree kubbaa miilaatti qabxii lakkoofsisuu ni danda'u."
Viidiyoo Dubartii cimtuu hojii dhiiraa qofaaf dhiifame hojjatte
Viidiyoo Dirree Dhawaatti lafa reeffi Hindootaa itti gubatu